Jihaad doone Soomaali ah oo lagu dilay Ciraaq – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in dalkaas lagu dilay wiil Soomaali ah oo kazoo jihad doontay dalka Canada ee Woqooyiga America.
Wiilkaan oo dhawaan warbaahinta Galbeedku shaacisay inuu ku biiray dagaalyahanada Suniyiinta ah ee Daacish, haatana la baxay Dowladda Islaamiga ah ayaa la sheegay iney qaraabo dhow yihiin R/wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Wiilka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Faarax Maxamed Faarax Shirdoon. Wargeyska CBC News ee kasoo baxa dalka Canada oo uu Faarax ku noolaa ayaa daabacay in wiilkan uu afar bilood ka hor ku biiray kooxdaas laguna dilay dalka Ciraaq.
Sidoo kale, waaxda amniga ee dalka Canad ayaa sheegtay in warkan ay ka heshay xilli ay si weyn uga war-haysay xaaladda uu mar walba ku sugan yahay Faarax Shirdoon.
Ruux ay walaalo yihiin wiilkan Soomaaliyeed ayaa baraha ay bulshada iskula xiriirto ku qoray in kooxda ay shaacisay geerida wiilkan, inkastoo aanay jirin warar dheeraad ah oo ku saabsan geeridiisa oo uu ruuxan sheegay.
Maydka Faarax ayaa la sheegay inay aaseen kooxihii uu u dagaalamayay oo u badan carab, kuwaasoo ugu baaqay dhallinyarada caalamka inay kasoo qaybgalaan dagaalka ay kula jiraan dowladaha Suuriya iyo Ciraaq.
Dowladda Islaamiga ah ee uu hogaamiyo Abubakar Al-baqdaadi ayaa dagaal kula jirta dowladda Ciraaq iyo nidaamka Suuriya ee u hogaamiyo Bashaar Al-asad.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa Dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Suuriya ku biirayey dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka imaanayey dalalka Galbeedka, iyadoo dhawaan kooxdaas soo bandhigtay wiil uu dhalay gudoomiyaha xisbiga UCID ee Somaliland, Feysal Cali Waraabe, kaasoo lagu magacaabo Xuseen Feysal Cali, kana soo jihaad doontay dalka Finland.